क’ठै यो कस्तो बि’जोग ! मोरङका ३५ बर्षीय सुवासलाई यो के आ’इलाग्यो यस्तो ? -
Home News क’ठै यो कस्तो बि’जोग ! मोरङका ३५ बर्षीय सुवासलाई यो के आ’इलाग्यो...
मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ मधुमल्लाका एक युवा अनौठो रो’गका कारण कस्टकर जीवनयापन गर्न बा’ध्य भएका छन् ।
केही गर्ने उमेर, परिवारको आशा र भरोसाको केन्द्र रहेका ३५ बर्षीय सुवास राईको शरीरभरी मा’सुको ड’ल्ला पलाएको छ । जसका कारण उनको जीवनशैली असामान्य बन्दै गएको छ ।
सामान्य परिवारका राईले आर्थिक अभावकै कारण समयमै आफ्नो रोगको उपचार गराउन नसकेर आ,जसम्म पी,डा सहदै आए, तर यतिबेला उनले पी’डा सहन पनि नसक्ने अवस्था भएको छ । शरीर’भरी मासु’को ड’ल्ला मात्र होइन घा’उ हुन थालेपछि उनको स्वास्थ्य अव’स्था झन ज’टि’ल बन्न पुगेको हो ।
उनको सम’स्या’लाई देखेर, बु’झेर स्थानीय शं’कर बजगाँईले राईको उपचारको लागि आर्थिक सहयोगको अपिल गरेका छन् । बजगाँईले मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने सामाजिक भावनाले शुरु गरेको ‘सुवास राई उपचार अभियान’ स्थानीय समाज र देश विदेशमा रहेका सहयोगी मनहरु समक्ष पुर्याउन पत्रकार र सञ्चारक्षेत्रको सहयोग मागेका छन् । सञ्चारकर्मीहरुले पनि प्राथमिकताका साथ राईको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जनमानसमा जानकारी दिने काम भएपछि हाल राईलाई उपचारको लागि सहयोग जुटन थालेको छ ।
सुवास’को पी’डा देखेर देशबिदेशमा हुने नेपालीको मन दुख्यो, सुवासको पी’डा’लाई आफ्नै पी’डा सम्झेर सहयोग गरिरहेका छन् । हालसम्म सुवासलाई देशविदेशबाट १ लाख ३० हजारमाथि सहयोग जुटेको छ । थप सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । शंकर भन्छन्– देशविदेशमा रहनुहुने साथीभाइहरुले आफ्नो खाजा खर्च कटाएर सहयोग गर्नुभएको छ ।
हाल सुवासको कोशी अञ्चल अस्पतालमा निःशुल्क उपचार शुरु भएको छ । कोशी अञ्चल अस्पतालमा मात्र सबै उपचार सम्भव नहुने भएकाले अ’न्यत्र थप उपचार गराउनु पर्ने डाक्टरले सुझाएका छन् । बजगाईले भने– अहिले पछाडिको भाग’को मा’सु का’ ट्ने भनिएको छ ।
पछाडिको भागको मासु का’ टे उनलाई सुत्न सहज हुनेछ । नत्र अरु बेला उनी ढाडमाथि पारेर सुत्ने गर्थे । शंकर भन्छन्– सुवास भाइको उपचार गरेर मुहारमा खुशी फर्काउन सकियो भने त्यो भन्दा आत्मिक शान्ति के हुन सक्छ र ? आखिर मानब भएपछि एकअर्काको सेवा गर्नु मानवता हो । भोलि जो कोहीमा दुःख बिराम पर्न सक्छ ।
सुवास राईको उपचार मात्र उनको सम’स्या होइन, उनको जीवनयापन अर्को ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । राईको उपचार र जीवनयापनमा सहयोग गर्न चाहनेले रकम पठाउन एनएमवी बैंकको खाता नम्बर ०५८००६१६२०२०००११ मनकारी दाताहरुलाई आग्रह गरिएको छ । पुर्वान्चल दैनिक बाट
Previous articleबाँदरलाई कान्छो छोरा बनाएका टिकटकमा भाईरल आमाछोरा मिडियामा। बाँदर पनि टिकटक बनाउन खप्पिस (भिडियो हेर्नुस)
Next articleफिल्म खेलाउने भन्दै छोरीलाई केटाले लिएर फ रार भएपछि आमा बुबाको रु वाई (भिडियो हेर्नुस्)